I-shampoos ezisebenzayo kunye nezicwangciso zeenwele ezomileyo. I-shampoo yemvelo kunye ne-conditioner ukukhanya
Ubuhle bomfazi Cosmetics kunye neengqumba
Ubunono obude, obude kunye neenwele ezinqamlekileyo zenziwe ngabafazi baseJapan njengendlela yokwenene yobunjani kunye nobuhle bemvelo. Kwiminyaka emininzi kwilizwe lelanga elinyukayo, iindlela zokunakekelwa kweenwele zendabuko zazigcinwe ngokufihlakeleyo kwaye zagqithiswa kuphela kwizizukulwana ngezizukulwana. Namhlanje iJapan lizwe elivulekileyo kwihlabathi lonke. Kwaye oku kuthetha ukuba izigidi zamabhinqa zinethuba lokuziqhelanisa nezimonyo zakwaJapan eziqhelekileyo, kubandakanywa nemikhiqizo yokunyamekela izinwele. Ngokomzekelo, ukuva umphumo omkhulu wokusebenzisa uluhlu lwezixhobo zokuvuselela i-shampoos kunye ne-conditioners Umi No Uruoiso kunye nezixhobo eziselwandle ezisuka kwinkampani uKracie.
I-shampoo enhle kakhulu yeenwele - i-shampoo ezivela kwizinto zendalo
Ukuguqulelwa kwi-Japanese Kracia kuthetha "ubomi". Eli gama linentsingiselo engumfuziselo, kuba uphawu luvelisa izimonyo ezizodwa, izakhi zendalo kwizinto ezinokuguqula unwele olubi kakhulu, ukubabuyisa ebomini. Iminyaka emininzi yamava, ukubambelela kumgangatho ophezulu wezinga eliphezulu nokusetyenziswa kweendlela zokupheka kunye nezithako zendabuko kuye kwavumela u-Kracie ukuba athathe iintliziyo zezigidi zamabhinqa emhlabeni jikelele.
Ngo-1996, ngokukhethekileyo iinwele ezibuthathaka, uphawu lwamaKracie lwaluqulunqa uluhlu lweemveliso eziphathekayo ezibizwa ngokuba ngu-Umi No Uruoiso, oku kuthetha ukuba "Izipho zolwandle nolwandle ukwenzela ukubuyiswa nokunyuka kweenwele ezimele." Iquka i-shampoos kunye ne-conditioners, ukubunjwa kwayo ehambelana nefomula ekhethekileyo ngokusekelwe kumacandelo ama-11 anobumba obomdaka, obomvu kunye obomvu (i-kelp, i-undiria pinnate, i-hijiki, i-glasilaria, i-porphyry, i-fucus, i-moduzuku kunye nabanye) kunye namanzi amaninzi olwandle.
Kulo nyaka, iingcali zogqirha ziye zahlaziywa ifom yechungechunge, lwandisa ukuxinwa kwamacandelo e-algae kunye nolwandle olwandle olunzulu ngamaxesha angama-1.5! Siyabulela izicatshulwa ze-algae, iinwele zondliwa ngokunyanisekileyo kwaye zihlanjululwe, kwaye amanzi aphantsi kolwandle anceda ukugcina umswakama ngobunwele obomileyo, okwenza unamandla kwaye uguquguquke. Kodwa inxalenye engavamile yeendlela zonke zecandelo le-Umi No Uruoiso liyinxalenye entsha ekhethekileyo - isitshixo sobuhle ukusuka ekujuleni kolwandle ukusuka ku-collagen olwandle, amanqatha ase-Atlantic kunye namafutha olwandle olwandle lwase-Atlantic. Ubungakanani bobuhle buya kungena kwisakhiwo seenwele kunye namaxesha amaninzi kuphucula umphumo wezinye izixhobo. I-Essence iphumelela ngokukhawuleza i-cuticle, isekela i-hydration kunye ne-elasticity yeenwele, inika ukukhanya okukhulu kunye nokukhanya.
Unonophelo olunzima - isibambiso seenwele ezintle nezempilweni
Naluphi na unwele oluhle olusetyenziswayo, abanakuze banikele ngokupheleleyo iinwele ngokutya okwaneleyo. Imfihlelo yeenwele ezinqamlekileyo ezinempilo ihlanganiswe ekunyamekeleni okunonophelo isebenzisa iimveliso eziliqela ukusuka kwinqaku elilodwa, ngalinye elo liphucula izakhiwo ezifanelekileyo zenye. Ukuba usebenzisa ama-shampoos kunye nezicwangciso ezivela kwi-series ye-Umi No Uruoiso kwinkimbinkimbi, isiphumo esisuka kwisicelo sabo siya kudlulela kwizinto ezilindelekileyo. Umzekelo, u-Umi No Uruoiso ubunqabileyo beentsimbi kunye nezicatshulwa zolwandle kunye namaminerali kunye ne-shampoo ephuculayo evela kwinqaku elifanayo liya kubomeleza iinwele kwaye ziwanike ukukhanya okunempilo kunye nokukhanya okukhulu.
Ngenxa yokwakheka kobutyebi bemvelo yolwandle, uluhlu lwe-Umi no-Uruoiso luhlambulula kakuhle, lunondla iinwele ngaphakathi, lukhusela ngaphandle. Esi sipho sangempela sezilwandle kunye nolwandle olusuka kwisiqhwa Kracia.
Ukongeza kwiindawo zokucocwa kakuhle kunye neenkxalabo ezinokhathalela, uchungechunge luya kukukholisa kunye nephunga elimnandi le-marine.
Xa kuthengwa uchungechunge kwivenkile ye-MEGUMI kunye nesitoreji se-intanethi isenzo esikhethekileyo saseKurumi sisebenza.
Indlela yokuqinisa imiphumo yezimonyo
Iindlela zokubhala iinwele
Amakha amaninzi avela kuJennifer Lopez
Inzuzo kunye nokusetyenziswa kweoli jojoba iinwele kunye nobuso
Iziqhamo zemifuno kwizonyango zemvelo
IQumrhu lokuKhula iCream
Amatshini afanelekileyo kunye neiglavu
Ukuphendulela ukuguquka kuyo yonke imifuno neziqhamo
Iingoma ngoMeyi 9, 2016: umkhosi kunye nemikhosi kubantwana (amagama kunye namanqaku)
Ukubona izicathulo ephupheni, ukuthini oku kuthetha ntoni?
U-Lady Gaga uzama ukunciphisa umzimba wakhe umtshato
Indlela yokunyamekela kakuhle i-rose - isityalo esihle kunye nesantya?
Iinzuzo zeerberberries ubuhle kunye nempilo
I-orgasm ibangela njani impilo yowesifazane?
Indlela yokuqhuba ukuqeqeshwa ngeemfesane ezinempilo
Izixhobo zokuphuhliswa kwabantwana kwiminyaka emine
I-Puree esuka kwesola
Ulwaphulo lwamatye: amatye okuphilisa
Ukubaluleka komdlalo ekuphuculeni kwengqondo yomntwana
IHoroscope ngoFebhuwari 23: Yintoni ekulindelweyo ngosuku lomkhuseli we-Fatherland?